पायल्स र रोकथाम – Janamanch.com
पायल्स र रोकथाम
पायल्सको समस्या भोग्ने नेपाली कमै होलान् । तपाईं पनि पायल्स रोगी होभने दुखाई र ठीक नहुने चिन्ताले आत्तिनुभएको होला । उपचार गर्दा पनि समाधान हुँदैन भन्ने सोच्दै हुनुहोला । तर, उपचार नगर्दा पायल्सले झनै दुःख दिन्छ । उपचार गरे पायल्सको समस्याबाट मुक्ति र सहजता मिल्ने चिकित्सकको सुझाब छ ।
के हो पायल्स ?
मलद्वारभन्दा चार सेन्टिमिटरभित्र रहेको भागलाई ‘एनल क्यानल’ भनिन्छ । यो क्यानलमा नसाहरू हुन्छन् । यी नसाहरूमा रक्तप्रवाह बढी हुन्छ । दिसा गर्ने समयमा बढी रक्तप्रवाह भयो तथा कब्जियत भयोभने नसा रगडिएर फुल्छ । फुलेका नसाबाट रगत आउने क्रमलाई नै पायल्स भनिन्छ । दिसा गर्दा रगत आउने र दिसा गरिसकेपछि आफैँ ठीक हुने गर्छ । क्यानलमा रहेका धेरै नसामध्ये तीनवटा ठूला हुन्छन् । सुरुमा तीनवटा नसा फुटेर रगत आउँछ । लामो समयसम्म उपचार नभए दबाबका कारण अन्य साना नसाहरू पनि फुट्ने खतरा रहन्छ ।
दोहोरिन्छ पायल्स ?
सुरुवाती चरणमा ठूला तीनवटा नसा काटेर फाले पनि पछि अन्य साना नसा ठूला हुन सक्छन् । यसकारण खानपिन र आनीबानीलाई नियन्त्रणमा नराखे कसैकसैलाई पायल्स दोहोरिन पनि सक्छ । तर, उपचार पद्दतिमा ज्यादै ठूलो समस्या नभएको हुँदा पुनःउपचार गर्न पनि सकिन्छ । तीन चरण पहिलो (रगत आउने) पहिलो चरणमा नसाहरू सुन्निएर दिसा गर्दा रगत मात्र आउँछ । दिसा गरिसकेपछि रगत आफैं बन्द हुन्छ । यो चरणमा कसैलाई दुख्छ भने कसैलाई दुख्दैन । यही चरणमा चिकित्सकलाई देखाएर औषधि सेवन गर्नुपर्छ । दोस्रो (कुसन भित्र र बाहिर हुने) पायल्स बढेर दिसा गर्दा बाहिर आउने र दिसा गरिसकेपछि पुनःभित्र नै जाने अवस्था दोस्रो चरण हो । यो चरणमा पुगेपछि सुईमार्फत औषधि दिएर कुसनलाई भित्र नै ब्यान्डिङ गरिन्छ । तेस्रो (कुसन बाहिरै अड्कने) यो पायल्स चरणमा पुगिसकेपछि नसाहरू बाहिरै अड्कने हुन्छ । यो चरणमा शल्यक्रियामार्फत उपचार गर्ने गरिन्छ । बाहिर आएको भागलाई निकालेर बाँकी भागलाई भित्रै फिक्स गर्ने नयाँ प्रविधि पनि आएको छ । यसो गर्दा दुखाइ कम हुने र घाउ भित्रै हुने भएकाले चाँडो काममा फर्कन सकिन्छ । शल्यक्रिया नगर्दा तेस्रो चरणमा पुगिसकेपछि शल्यक्रिया गरिएन भने रगत बगिरहने तथा पायल्स बाहिरै अड्किएर धेरै दुख्ने समस्या हुन्छ । बाहिरै रहँदा विभिन्न किसिमको संक्रमण भई घाउ हुने र कुहिने पनि हुन सक्छ । उपचारपछि यसो गरौँ यी तीनवटै चरणको उपचारसँगै औषधि सेवन गरेपछि विशेष बानी व्यवहार अपनाउनुपर्छ । मुख्यतः रेसा र छोक्रा भएका कुरा बढी खानुपर्छ । माछा–मासु कम खाने, साग, तरकारी, फलफूल तथा झोलयुक्त खानेकुरा बढी खानुपर्छ । दैनिक दिसा गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । नियमित बाटामा मनतातो पानी राखेर बस्ने गर्नुपर्छ । आवश्यक परे चिकित्सकको सल्लाहमा दिसा नरम गर्ने आर्युवेदिक या एलोपेथिक औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ । (नोटः दिसामा रगत आउने पायल्सले मात्रै हुँदैन, दिसामा रगत देखिए तत्काल चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर कारण पहिल्याउनुपर्छ ।
दिसा गर्ने समयमा बढी रक्तप्रवाह भयो तथा कब्जियत भयोभने नसा रगडिएर फुल्छ । फुलेका नसाबाट रगत आउने क्रमलाई नै पायल्स भनिन्छ सामान्यतया पायल्स रोग त्यस्तो रोग हो जुन मलद्धारसँग सम्बन्धित छ । मानिसहरुको भिन्न जीवनशैली र खानपानले गर्दा थुप्रैलाई आजकाल धेरै प्रकारको रोग लाग्ने गर्दछ । यसमध्ये पायल्स रोग धेरै मानिसहरुको समस्या भएको छ । लोकलाजका कारण धेरै मानिसहरुले पायल्स रोगको बारेमा खुलेर परिवारसँग कुरा गर्दैनन् । अझ कतिलाई त पायल्स रोग के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन । यसको लक्षण भनेको दिसा गर्दा रगत आउने, मलद्वारमा मासु पलाउने, दुख्ने, सुन्निने र चिलाउने गर्दछ। पायल्स रोगीमध्ये कसैको पीप बग्छ, अंगुरको झुप्पोजस्तो पलाएको हुन्छ र रातो सुन्निएको डल्लो हुन्छ । यो रोग लाग्दा कसैलाई रगत आउँछ भने कसैलाई आउँदैन।
पायल्स हुनुको मुख्य कारण जीवनशैली र खानपान हो । पानी कम खाने, हरियो सागपात नखाने, शारीरिक व्यायाम कम गर्ने, धेरै व्रत बस्ने, बढि चिया पिउने, माछामासु तथा सुख्खा खानेकुरा जस्तै चाउचाउ, बिस्कुट, चाउमिन बढि खाने, अनियमित खानपान, अनिन्द्रा, धेरै तनाव लिने, रक्सी, चुरोट, सूर्तीको अत्यधिक प्रयोग कलेजोको खराबी, तथा भुटेतारेका कुरा बढी खाने गर्नाले पायल्स तथा दिसाबाट रगत आउने, मासु पलाउनेजस्ता समस्या बढी हुन्छ । दिसा कब्जियत, वा दिसा थोरै आउनु, गोटा पर्नु, नियमित दिसा नहुनु, दिसा तथा पाद रोक्नु, दिसा पिसाब लागेको बेलामा नगर्नु, अत्यधिक गर्मी वातावरणमा बस्नु, चिल्लो तथा तेलको प्रयोग बढी हुनु पनि यसको कारण हो । शरीरलाई आवश्यकभन्दा बढी खानु, तनाव लिनु तथा जीवनशैली एकनासको नभएका कारण पायल्स हुन्छ ।
पायल्सका बिरानिले खानपर्ने
हरियो सागपात काँचै खाने, चोकरसहितको गहुँको पिठो, रोटी, जौ, ब्राउन राइस, रहर तथा मुगको दाल खाने, पानी प्रशस्त पिउने, फलफुलको सेवन पनि प्रशस्तै गर्ने । खाना खाँदा मुला, काँक्रो, गाँजर खाने । नरिबल, अनार, स्याउ, बेलजस्ता फलफुल, करेला, धनिया, लौकाले पनि पायल्स रोगीहरुलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । रेसादार खानाहरु धेरै खाने ।
पायल्सका बिरामीले गर्न हुने र नहुने
पायल्सका बिरामीले हप्तामा एकपटक वा आवश्यकता अनुसार पेट सफा गराउने, पेट हल्का राखी उपचार गर्नु एकदम राम्रो विधि हो । एकदम कम र हल्का खाने, शरीरले पचाउन सक्ने गरी खानुपर्छ । हप्तामा दुई तीनदिन शुरुमा रोग बढेको अवस्थामा एकदिन बिराएर फलफूलको रस वा पानीमात्र खाएर बस्नुपर्छ । डाक्टरको सल्लाहअनुसार केही राम्रो भएपछि बिस्तारै काँचै खानेकुरा खाएर बस्ने, पेटलाई हलुंगो बनाएर औषधि गर्दै जाने । यस्तै, पिपलको बोक्रा मसिनो बनाएर सुकाएर पिस्ने, शुद्ध तोरीको तेलमा मिसाएर नियमित बिहान बेलुकी मासु बढेको ठाउँमा एकदेखि तीन महिनासम लगाएमा पलाएको मासु बिस्तारै सुक्दै जान्छ र पायल्स पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
पायल्सको घरेलु उपचार
एक गिलास गाइको दुधमा आधा कागती निचोरेर तुरुन्त खाँदा रगत तथा पिप आउने जस्ता समस्या ठीक हुन्छ । कसैलाई फिटकिरी एक टुक्रा राखेर दश लिटर जति पानीमा दिनको दश मिनेट बस्दा धेरै आराम मिल्छ । नरिवलको बाहिरको जटा डढाएर एक चिम्टी खरानी र दुबोको २ चम्चा रस घोलेर बिहान बेलुका एक गिलास मनतातो पानीसंग खाँदा सन्चो भएको पाइएको छ । मुलाको बिउ कुटेर तोरीको तेलमा फिटेर दिसा गरिसकेपछि लगाउने गर्दा पनि कसैलाई राहत मिल्दछ । आफ्नो पिसाबले गद्द्वार धुने । नियमित रुपमा योग र शारीरिक व्यायाम गर्दा पनि सन्चो हुन्छ । यो समस्याको नआत्तिइकन उपचार गर्नुपर्छ । औषधि उपचारबाट निको हुन केही समय लाग्न सक्छ । शल्यक्रिया पनि अन्तिम उपचार भने होइन । कहिलकाहीँ शल्यक्रियापछि पनि समस्या बल्झिएको र निको नभएको पाइन्छ ।